30 taona mahery izao : mihamitotongana hatrany ny fari-piainan’ny tantsaha | NewsMada
30 taona mahery izao : mihamitotongana hatrany ny fari-piainan’ny tantsaha
Par Taratra sur 15/11/2016
Ao anatin’ny fahantrana tanteraka ny tantsaha, nefa lazaina fa miankina amin’ny fambolena sy ny fiompiana ny toekarena malagasy. Taona maro ny nisian’izany ary mihamitontongana hatrany ny fari-piainan’ireo olona ireo. Manamarina izany ireo tarehimarika vokatry ny fanadihadiana nataon’ny Finscope, taona 2015 sy 2016.
Mivelona amin’ny fambolena, fiompiana sy ny jono ny maro anisa, manodidina ny 3,6 tapitrisa amin’ny tokantrano tantsaha. Maro anisa amin’ireo, manjifa sy mivarotra izay novokariny, 18 % ireo manjifa tanteraka izay novokariny ary 9 % ny manao asa fambolena ho an’ny varotra fotsiny ihany. Maivana ny fambolena. Hita izany amin’ny fananan-tany, karazam-boly sy fiompiana atao, fananana fitaovana fampiasa. Zara raha misy ny vola hoenti-miasa. Tokantrano iray, araka ny salanisa, tsy manana fidiram-bola afa-tsy 82.000 Ar isam-bolana.
Nanomboka ny Repoblika faharoa, tsy nitsaha-nitotongana ny sehatry ny fambolena, hita izany amin’ireo faharavan’ny fotodrafitrasa maro samihafa, saika manerana ny faritra ny rehetra. Ankoatra izany ny faharatsian’ny lalana, tsy fahampian’ny angovo, tsy fisian’ny fandriampahalemana. Amin’ny ankapobeny, 96 % ny mpamboly, 72 % mpiompy ary 7 % mpanjono.
Olana amin’ny ankapobeny
– Tsy ampy tany volena : 84 % ; 49 % amin’ny tokantrano tantsaha, tsy manana tany mihoatra ny 100 m2 na 1 a.
– Tsy ampy famatsian-drano : 71 %
– Tsy misy ambim-bokatra amidy : 70 %
– Tsy mahita vola hividianana masomboly na zezika : 62 %
– Tsy ahitana fitaterana : 59 %
– Lavitry ny tsena : 58 %
– Lafo ny fitaterana : 57 %
Karazana fambolena sy fiompiana
– Voly vary tsotra : 82 %, vokatra amin’ny ankapobeny : 1,5 t/ha
– Voly mangahazo, katsaka, ovy sy mitovy sokajy amin’ireo : 67 %
– Karazam-boly hafa : 7 %
– Fiompiana akoho sy vorona : 77 %
– Fiompiana kisoa : 30 %
– Fiompiana omby : 49 %
– Fiompiana ondry na osy : 11 %
Fananana fitaovana fampiasa
– Trakitera na milina : latsaky ny 1 %
– Broety : 3 %
– Angadin’omby : 11 %
– Moto : 3 %
– Bisikileta : 19 %